Semalt: Fomba fanao mahazatra mahakasika ny e-commerce
Ireo mpangalatra dia toa manintona ny fomba fandoavam-bola hafa rehefa manompotoerana tsara indrindra hitondrana hosoka. Hatramin'ny taona 2013, ny trangan'ny e-varotra e-varotra dia nitombo ho 19% noho izany ho an'ny $ 100, 5,65Ny cents dia mandeha any amin'ny mpitsikilo.
Ny lahatsoratra manaraka, Max Bell, ny Semalt Customer Success Manager, no manazava ny karazana fifangaroan'ny e-varotra matetika.
Mitazona 71%, 66% ny fisintonana, ary 63% ny halatra kaonty - hosting baratos en. Ireo mpanafika matetikakara-bola. Ny tanjona eto dia ny hanatanterahana fifampiraharaham-barotra amin'ny maha-izy azy ny maha-izy azy amin'ny maha-vaovao azy dia mahasosotra.Ny mpitsikilo dia mifantoka ny mombamomba azy manokana, izay ahafahan'izy ireo mitantana ireo fifanakalozan-kevitra amin'ny aterineto. Ny famosaviana dia fomba iray ampiasaina betsakatrondro ho an'ny fampahalalana mpanjifa amin'ny tranokala. Ny Pharming dia teknika iray izay ahafahan'ny mpanafika manipika tranonkala iray mba hitarihana mpanjifa ho an'nynomena ny tranonkala, avy aiza ny tenimiafiny ampiasain'izy ireo dia avy eo ampiasaina mba hahafantarana ny maha-izy azy. Fanafihana amin'ny mpividy e-varotra, aryNy fampiasana malware amin'ny tranonkala manakenda koa dia tafiditra amin'ity sokajy ity. Ny fanafihana ataon'ny olona an-tsokosoko dia manjavozavo kokoa ary tafiditra ao anatin'izany ny fanongananatahirin-kevitra amin'ny fisamborana fifandraisana eo amin'ny tranokala sy ny mpanjifa.
Eto, ny mpanjifa dia mandidy ny entana ary avy eo dia mampiasa ny "entana" endrika karama toy nybola, banky orinasa. Avy eo dia manomboka volavolan-dalàna izy ireo milaza fa nosamborina na nangalatra ny fampahalalam-baovao. Ireo karazanany mpanjifa dia mahazo valiny mahasoa, kanefa mitazona ny entana na ny serivisy. Mitohy ny fitaterana amin'ny fandefasana entana izay tsy misy ny mpanjifaTe hanararaotra ny adiresy fiteniny izy ireo. Ny mpampiasa kosa dia mampiasa ny antsipiriany mba hahazoana ilay vokatra..
Fadio ny hosoka
Amin'io tranga io dia mampiasa karatra fitakiana mba hividianana ny hacker, saingy manipika izy ireony antsipiriany momba ny fifanakalozan-drivotra hanodina ny rafitry ny famandrihana hosoka. Ny mpangalatra dia mitaky fahaizana ara-teknika hanatanterahana izanyny hosoka. Ilaina ny manamboatra ny fomba fiasan'ny rafitra finday, ary be dia be momba ny tompon'ilay karatra nangalarina. Ampiasain'izy ireo avy eo izanyfampahalalana marina mba hamitahana ny rafitra. Alohan'ny hanatanterahana ny asany mahomby, dia tsy maintsy mamantatra ilay karatra izy ireo mba hijerena raha toa ka mahomby.
Fidiram-bola amin'ny Affiliate
Mety mampiasa fomba fiasa tanteraka ny olona iray na mahazo olona tena te hiditra amin'ny maha-mpivarotra azymampiasa kaonty sandoka. Ny tanjona dia ny hanangona vola betsaka araka izay azony atao amin'ny programa afrikana amin'ny alàlan'ny fanodinana ny fifamoivoizana na ny statistikany endrika famantarana.
Misy dingana telo izany. Ny voalohany dia ny mamorona ny fanatobiana fivarotana hosokaNy vidiny ambany amin'ny entana avo lenta. Ny dingana faharoa dia ny fampiasana angon-drakitra amin'ny fangalarana karama ary ny fampiasana ireo anarana nangonina avy amin'ireo vola ireokaratra, mividy tsena amin'ny fivarotana tena izy. Izy ireo dia manome antoka ny hanolotra ny vokatra amin'ny mpanjifa mba hahazoana antoka ny fahamendrehana amin'ny fividianana voalohany.Farany, ny mpisoloky dia mampiasa ny fampahalalana avy amin'ny karatra halatra mba hahazoana vola bebe kokoa.
Ity karazana hosoka ity dia mivantana: ny mpanararaotra manolotra entana amin'ny vidiny ambany,fa tsy manipy azy ireo amin'ny mpanjifa. Nefa, izy ireo dia mitazona ny fandoavam-bola ary tsy miavaka amin'ny karazana karama.
Ny hosoka iraisam-pirenena
Ny fihanaky ny hosoka dia ny tsy fahampian'ny rafitra iraisana mba hanomezana tokyny fomba fiasa rehetra natao tany amin'ny firenena 14, ary tany amin'ny tsena samihafa. Ny 52% dia mihevitra fa sarotra be ny hosoka,ary ny isa mitovy amin'izany tsy mahatsikaritra ny fitaovana azo ampiasaina amin'ny fisorohana ny hosoka. Ny sakana amin'ny fiteny dia manakana ny fitantanana ny hosokafirenena, ary ho an'ny tsirairay.
Sarotra ho an'ny mpivarotra ny hosoka. Na izany aza, rehefa manaikyfampahalalam-baovao isan-karazany, ny fampitahorana dia mety hampihorohoro. Ireo vohikala antoko fahatelo dia mitarika amin'ny asa atao hosoka, arahin'ny finday,ary farany, tranonkala mpivarotra.